Snapdragon 845, RAM 8GB နဲ့ Geekbench မှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ Meizu 16 – DigitalTimes.com.mm
Snapdragon 845, RAM 8GB နဲ့ Geekbench မှာပေါ်လာခဲ့တဲ့ Meizu 16
admin Aug 08, 2018
Meizu 16 နဲ့ 16 Plus တို့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိသင့်သလောက်တော့ သိပြီးဖြစ်ပေမယ့် နောက်ထပ် Geekbench မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာလေးတစ်ခုတွေ့ထားပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၈ရက်နေ့ ဒီနေ့မှာတရားဝင်မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပြီး မနေ့ကပဲ Geekbench မှာ သူ့ရဲ့ ရမှတ်တွေထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ Benchmark ရမှတ်တွေအရတော့ Multi-core score ကြီးက တော်တော်ကြီးကြမ်းပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ Vapor Chamber အအေးပေးစနစ်ကိုအသုံးပြုလိုက်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Snapdragon 845 သုံးမယ်ဆိုတာကတော့ အရင်ကတည်းကသိပြီးသားဆိုတော့ သိပ်ပြီးမထူးဆန်းပါဘူး။ Meizu ရဲ့ ပုံမှန်မော်ဒယ်လ်နဲ့ Plus မော်ဒယ်လ် ၂ခုလုံးမှာသုံးမယ့် Chipset ချင်းက တူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် Meizu အနေနဲ့ RAM 8GB သုံးပေးထားတယ်ဆိုတာကို တော်တော်အံ့အားသင့်မိခဲ့ပါတယ်။
အရင်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့သိခဲ့တာက RAM 6GB, storage 128GB နဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုပဲသိခဲ့တဲ့အတွက် ဒီ RAM 8GB ဆိုတာက Plus model အတွက်လား ဒါမှမဟုတ် Memory ရွေးစရာတစ်ခုခုအနေနဲ့ထွက်လာတာလားဆိုတာကို ဒီနေ့ပဲကြည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်.
Meizu 16 နဲ့ 16 Plus တို့နဲ့ပတျသတျပွီး သိသငျ့သလောကျတော့ သိပွီးဖွဈပမေယျ့ နောကျထပျ Geekbench မှာ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတာလေးတဈခုတှထေ့ားပါတယျ။
သွဂုတျလ ၈ရကျနေ့ ဒီနမှေ့ာတရားဝငျမိတျဆကျတော့မှာဖွဈပွီး မနကေ့ပဲ Geekbench မှာ သူ့ရဲ့ ရမှတျတှထှေကျလာခဲ့ပါပွီ။ Benchmark ရမှတျတှအေရတော့ Multi-core score ကွီးက တျောတျောကွီးကွမျးပါတယျ။ ဖွဈနိုငျတာကတော့ Vapor Chamber အအေးပေးစနဈကိုအသုံးပွုလိုကျတဲ့အတှကျ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
Snapdragon 845 သုံးမယျဆိုတာကတော့ အရငျကတညျးကသိပွီးသားဆိုတော့ သိပျပွီးမထူးဆနျးပါဘူး။ Meizu ရဲ့ ပုံမှနျမျောဒယျလျနဲ့ Plus မျောဒယျလျ ၂ခုလုံးမှာသုံးမယျ့ Chipset ခငျြးက တူတူပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ Meizu အနနေဲ့ RAM 8GB သုံးပေးထားတယျဆိုတာကို တျောတျောအံ့အားသငျ့မိခဲ့ပါတယျ။
အရငျကတညျးက ကြှနျတျောတို့သိခဲ့တာက RAM 6GB, storage 128GB နဲ့လာမယျဆိုတာကိုပဲသိခဲ့တဲ့အတှကျ ဒီ RAM 8GB ဆိုတာက Plus model အတှကျလား ဒါမှမဟုတျ Memory ရှေးစရာတဈခုခုအနနေဲ့ထှကျလာတာလားဆိုတာကို ဒီနပေဲ့ကွညျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ.
Android Pie ရဲ့ စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံး Features အသစ်များ
OLED Display နဲ့ NFC တို့ ပါဝင်တဲ့ Hey+ စမတ်လက်ပတ်ကို Xiaomi မိတ်ဆက်